China Thermocouple yeGasi Oveni Vagadziri uye Vatengesi - Aokai
Musha > Zvigadzirwa > Kubika kweThermocouple > Thermocouple yeGesi Ovheni
Thermocouple yeGesi Ovheni Vagadziri
Thermocouple yeGasi Oveni inogona kushandiswa mune akawanda maapplication. Zvose zvekutengesa uye zvekugara zvishandiso. Kushandiswa kwekutengesa kweGasi Solenoid Mavharuvhu kazhinji kunosanganisira chero muchina wepneumatic unoshandisa gasi kudzvanywa kufambisa zvikamu zvaro. Zvivakwa zvekugadzira zvinogona kushandisa solenoid mavharuvhu kudzora kufamba kwemagasi anoshandiswa mukugadzira kwavo maitiro.
Zvigaro zvekugara zvinosanganisira solenoid mavharuvhu anoshandiswa mukati mevira Thermocouple yeGesi Ovhiri inodzora kana gasi rauya uye rikabatidzwa nechiedza chemutyairi kuti chigadzire. Mota dzinofambiswa negasi chaiyo dzinoshandisa solenoid mavharuvhu kudzora kuyerera kwegasi mumagetsi einjini. Nepo gasi-inowachirwa zvipfeko zvekuomesa zvakare ine mavhavhosi e-solenoid ekudzora kuyerera kwegesi muchomisa, izvo zvinobatsira kudzivirira moto kana gasi chepfu.
inopa mutsara wakakura weThermocouple yeGasi Ovheni yakagadzirirwa kudzora kuyerera kwehutsi gasi, yemvura propane uye ese mamakisi emafuta emafuta anoshandiswa mukupisa maapplication akadai se: maviramu emaindasitiri, ovheni, kilns, incinerators, burners uye boilers. Solenoid inoshanda mavharuvhu anobata combustion system pilot uye main line mafuta shutoff uye control zvinodiwa. Aya mavharuvhu anowanikwa mune 2-nzira inowanzovharwa, kazhinji yakavhurika, manual reset, uye 3-nzira diversion.
Thermocouple yeGesi Ovhiti inowanikwa mune yendarira, aluminium, uye simbi isina simbi. Zvinhu zvavo zvikuru zvinosanganisira junction box; pombi pombi; chiratidzo chekuona; humbowo hwekuvhara; anotungamira anotenderwa mvumo; uye pombi yekubatanidza kubva pa1 / 8â € kusvika ku3â €. Mazhinji mavharuvhu anoverengerwa -40ºF sevhisi yekumisikidza kwekunze munzvimbo dzinotonhora.
Bürkertâ € TM s renji yeThermocouple yeGesi Ovheni inowanikwa mune yakakura mhando yemuviri uye chisimbiso zvinhu. Kubva PTFE, kuenda kuNBR, EPDM uye kunyangwe PEEK, ichi chidzidzo chekudzidzisa pane solenoid vharafu zvinhu naSolenoid Valve nyanzvi Michael Hannig anokuudza zvese zvaunoda kuti uzive.
1, iyo thermoelectric inogona
Kunopisa hunhu: Thermocouple yeGesi Ovheni pamoto tembiricha iri 600-700 ° C, iyo thermoelectric kugona ichave iyo 15 mv kana yakakura
Inotonhorera ficha: iyo thermocouple pane tembiricha yemurazvo i600-700 ° C, ichidziya kugura mhepo mushure me5 min, apo iyo thermoelectric inogona kuve iyo.
Tembiricha yemabasa: tembiricha haina kukwira kupfuura 700 ° C, yasara haina kupfuura 125 ° C.
2, kupikisa kwemukati kunoenderana nerudzi uye kureba, zvinoratidzwa mumifananidzo inoenderana, kushivirira mukati me10% yemutengo wakatarwa.
3, zvemaziso zvivakwa
Waya ichitenderera kana kuita kukotamisa radius isingasviki gumi mm, inofanirwa kudzivirirwa mukushanda kwegungano uye kupeta pamwe nekukwesana nezviridzwa uye zvishandiso zvakapinza chikamu, Thermocouple yeGesi Ovhoni inofanirwa kudzivirira iyo Angle diki yekukotama ichitenderedza chinzvimbo chekutenderera.
Welding chinzvimbo inogona kutakura ingangoita 150 n kudhonza simba.
Saizi yechigadzirwa inogona kugadzirisa maererano nezvinodiwa nevatengi.
Thermocouple yeGasi Ovheni zvikamu zvinofanirwa kudziya mukudziya thermocouple tip 3-5 mm, kwete kuve yakanyanya muromo nzvimbo murazvo wemukati, zvinokonzeresa zvinogona uye kuderedza hupenyu.
Thermocouple yeGasi Ovheni yakagadziriswa kumashure uye iyo yakanaka uye yakaipa waya zvikamu, sezvinobvira kuchengetedza zvakanaka kupisa kupisa, kuderedza kuisa ndiro uye thermocouple sheath yekuunganidza kupisa, nguva yakanaka yekuvhara valve.
Mubvunzo: Unogona here kupa Thermocouple yeGesi Ovheni?
A: Ehe, tinogona kukupa samples mahara (pasi pematatu), uye iwe unongobhadhara zvinhu.
A: Mukati memazuva makumi maviri nemaviri mushure mekutambira Thermocouple yako yeGesi Ovhiti dhipoziti.
Mubvunzo: Unogona kundiudza Thermocouple yeGesi Oven yekubhadhara nguva?
A: Nguva dzose 30% TT uye kuenzanisa neBL copy.also tinogona kugamuchira LC\_DP\_DA.
Mubvunzo: Iwe unozopa Thermocouple yeGesi Oven chero zvidzikiso isu patinoisa yakakura kuraira?
A: Ehe saizvozvo, asi dhisikaundi zvinoenderana mhando.
Gasi Cooker Kuchengetedza Thermocouple
Inotora chikamu chakakosha mukuona kushandiswa kwakachengeteka kwemubiki wako - sezvo ichiita semudziyo wekuchengetedza pane yako gasi rinopisa. Basa rayo nderekudzivirira gasi rinopisa richisiiwa pane iro risina kuvheneka, izvo zvine ngozi zvikuru sezvo zvinogona kukonzera kuputika. Iyo thermocouple inosungirirwa kune gasi regulator valve, uye inodzora kuyerera kwegasi kuovheni yako.Takatumira kunze kwedu gasi cooker kuchengetedza thermocouple kunyika dzinopfuura makumi matatu nerutsigiro rwakasimba rwehunyanzvi, kunaka kwakanaka uye masevhisi.
Nhungamiro yeopartartion: Thermocouple ine tembiricha switch mukati, Mukushanda senge hovhoni yegasi isiri-inoshanda nzvimbo tembiricha inopfuura tembiricha maficha akayerwa tembiricha, panguva ino tembiricha switch dzinongoerekana dzabvisa magetsi, kuve nechengetedzo chengetedzo. gasi thermocouple kubva kwatiri. Chikumbiro chega chega kubva kune vatengi chiri kupindurwa mukati memaawa makumi maviri nemana.
Kupisa Kwekuchinja Kwemukati
Zvese zvine ROHS uye Reach standard.Isina guruva uye auto-clean workshop. Semunhu ane hunyanzvi tembiricha inochinja mukati, unogona kuzorora mukati mekutenga tembiricha kubva mufekitori yedu uye tichakupa yakanakisa mushure mekutengesa sevhisi uye nenguva. delivery.
Yedu Flexible Thermocouples anouya nemhando dzakasiyana siyana dzekuvaka kuti dzienderane nezvinodiwa chaizvo. Yakagadzirwa neanoshanduka kugona, aya ma sensors anogona kushandisirwa munzvimbo dzakaoma kuwana nzvimbo kuona chokwadi uye kuvimbika, zvisinei iyo nzvimbo inoda tembiricha kuyerwa.Une chokwadi chekutenga inoshanduka thermocouple kubva kufekitori yedu uye isu tinokupa iwe yakanakisa mushure-yekutengesa sevhisi. uye kukurukura nenguva.
Aokai inyanzvi Thermocouple yeGesi Ovheni vagadziri uye vatengesi muChina. Zvigadzirwa zvedu ndezve CE Certified. Mukuwedzera, isu tinopawo sampuli yemahara. Unogona kutenga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvinogara nemutengo wakaderera kubva kufekitari yedu. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu zvemhando, ndapota taura nesu nekukurumidza. Tarisira kushanda newe! Gamuchira shamwari kubva kumativi ese ehupenyu anouya kuzoshanya, kutungamira uye kutaurirana bhizinesi.